Serbia: Fijery Maro Kokoa Momba ny Nahavoafidy Indray an’i Boris Tadic · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2017 6:36 GMT
(Fanamarihana: nivoaka tamin'ny 7 febroary 2008 ny teny anglisin'ity lahatsoratra ity)
Ny tatitry ny Global Voices teo aloha miompana amin'ny voka-pifidianana dia nahasahana ny fihetseham-pon'ireo bilaogera miteny anglisy ao Serbia. Eto ambany ny dikanteny avy amin'ny lahatsoratra Serba roa hafa, izay samy nivoaka tao amin'ny vavahadim-bilaogy B92 avokoa.
Tamin'ny 4 febroary no nanoratan'i Branislav Kovačević Cole :
[…] Raha tokony hiarahaba an'i Boris Tadic aho, dia te-hampitandrina azy hamakafaka tsara ny voka-pifidianana. Tsy tokony hieritreritra izy fa niakatra ny ampaham-baton'ny Antoko Demaokratika misy azy. Ary tokony hankasitraka ireo mpifidy rehetra izay matotra kokoa noho ireo mpitarika ara-politika izy… […]
[…] Taorian'ny fandreseny dia manana andraikitra lehibe i Boris Tadic sy ny Antokoa Demaokratika. Tsy misy fotoana hankalazana.
Miarahaba ny olom-pirenena rehetra izay nankany amin'ny biraom-pifidianana aho ka tamin'izay no nanakanany ireo radikaIy tsy handray ny fahefana.
Tamin'ny 5 febroary no nanoratan’i Nune Popović:
Nandray lesona ara-politika tamin'ny [5 okt] 2000 ireo hery anti-demaokratikan'i Serbia ka tsy nitsaha-nitombo ny herim-panintonan-dry zareo nanomboka tamin'izay. Tsy mitovy amin'izy ireo kosa fa tsy nandray lesona sy tsy naka fepetra tamin'ny fampitandremana maro. Manidy tena ao anatin'ny faribolana mikaton-dry zareo ihany ry zareo ka manana sary diso amin'ny toe-draharaha ao Serbia ka mifanome toky tsy araka ny tokony ho izy amin'ny fisian'ny demaokrasia sarintsariny eto Serbia.
Fotoana fohy amin'ity indray mitoraka ity no ananan'ny fiaraha-mientana demaokratika hiadiana amin'ireo antoko radikaly nasionaly-sosialista eto Serbia. […]
[…] I Pôlônina izao manana ny Ivontoeram-Pahatsiarovana Nasionaly, andrim-panjakana iray miantoka fa tsy hanadino mandrakizay izay nataon'ireo jiolahy avy amin'ny rafitra isan-karazany tamin'ny fitondrana teo aloha rehetra ny vahoakany. Ny tanjona dia ny hahitana sy ny isamborana azy ireny.
Raha manana andrim-panjakana tahaka izany izao i Serbia, dia atsy voatery isika hampahatsiahy ny olom-pirenena hoe inona no fanaon'ireo radikaly ireo, [Vojislav Seselj], [Slobodan Milosevic] ary ireo fitondrana notarihany. Ary tsy voatery hampahatsiahy ny tenantsika isika tamin'izay nataondry zareo tamintsika sy ny antony mbola tsy hanasaziana azy ireo. Manohitra ny zo ao ambaditsika ry zareo. Ny sasany moa dia mihetsika tahaka ireny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga raha nanana ny fahefana feno tsy azo notoherina ry zareo, ary tsy nosaziana ry zareo. […]